36 Mitemo yeSocial Media | Martech Zone
Mitemo yeSocial Media
Chishanu, Mbudzi 16, 2012 Chishanu, Mbudzi 16, 2012 Douglas Karr
Kana iwe waverenga iyi blog kwenguva yakati, iwe unoziva kuti ini ndinozvidza mitemo. Zvemagariro midhiya achiri mudiki kwazvo saka kushandisa mirau panguva ino kuchiri kuita kunge kusati kwasvika. Ivo vanhu vari pa FastCompany vari kuisa pamwechete chaizvo muunganidzwa wemanyoka emazano uye nekuvadaidza iwo Mitemo yeSocial Media.
Iyi infographic muunganidzwa wemitemo yakaburitswa munaGunyana dhizaini yemagazini. Ini ndanga ndisiri kudaidza iyi mitemo sezvo ini ndatyora mishoma yacho uye ndichiri kuwana mhedzisiro… asi ini ndinokurudzira zvikuru izvi seyakakura muunganidzwa wemazano ekuvandudza ako ekushambadzira munharaunda.
FastCompany ikozvino iri kuunganidza matipi ako. Unogona vatumire pamhepo.
Tags: fastcompanymitemo yemagariro enhauevanhu vezvenhaupasocial media infographicmagariro enhau anotongasocial media tips
Nov 30, 2012 na1:55 AM
Dzimwe nguva ndinofuratira mitemo asi nenzira yandinoremekedza vanhu vanochengeta mitemo yakadai, asi pasocial media ndinoshivirira mitemo ndinoita zvese zvandinoda ndisingafungi nezvemitemo.
Ini handibvumirani nemurwi weizvi uye handitombofungi kuti zvimwe ndezvesocial media.
Isu tiri kubvumirana @barryjfeldman:disqus !
… Kwete chete ivo vanokurumidza - iyo pfungwa chaiyo yekushambadzira social media 'Mitemo' inoseka zvinyoro nyoro! Ditto kune ese aya ekunyepedzera ruminations pasocial 'Best Practices'…Kunze kwekunge, ndiri kuyedza kukutengesera bhuku rangu razvino - kana zvakadaro, ramba uchiaunganidza!
Zvakakomba - hapana zuva rakanakisa kana nguva yekutumira pa Twitter…. kana chimwe chinhu chakanakisa chero chinhu chipi zvacho chekuita basa rekugarisana nemhando - kushambadzira pasocial kune zvakawanda zvakasiyana zvinogona kuita kuti musoro wako utenderere uchingofunga nezvazvo! Zvekugarisana zvakanaka…zvakaoma…kubhuya pamusoro pekugona kushambadzira - uye njodzi dzinogona kuitika kune chero mushambadzi ari kuedza kurerutsa hupenyu chaihwo kubva mazviri!